चुनावमा पराजयपछि गरेको बाचा जब नारायणकाजीले आफ्नै बिर्सिए ! — SuchanaKendra.Com
चुनावमा पराजयपछि गरेको बाचा जब नारायणकाजीले आफ्नै बिर्सिए !
काठमाण्डौं । ‘राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार छान्न शुक्रबार बिहान नेकपा सचिवालय बैठकमा गरगर्मी बहस चल्यो । आकांक्षी करिब डेढ सयको नाम एकातिर थियो, सचिवालय बैठकको निर्णय अर्कोतिर । बैठक पार्टीका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने या नबन्नेमै केन्द्रित थियो ।
उनीहरुका विषयमा छिनोफानो भएपछि मात्र, बल्ल नेकपाले अन्य व्यक्तिको नाममा छलफल चलायो । बैठकमा गौतमले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभासम्बन्धी संवैधानिक दृष्टिकोण एउटै भए मात्र आफू राष्ट्रियसभामा जाने बताए थिए । शुक्रबार नारायणकाजी श्रेष्ठले आफैंले सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्याका लागि उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरे ।
आफ्नै निर्णयविपरीत राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नुपर्ने त्यस्तो के आईलाग्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यतिखेर मैले प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्दिन भनेको मात्रै हो, राष्ट्रियसभामा जान्न भनेको थिइनँ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट